नेपाल आज | के कारणले हुन्छ पिनास? जान्नुहोस् जोगिने उपाय
के कारणले हुन्छ पिनास? जान्नुहोस् जोगिने उपाय
काठमाडौं । पटकपटक रुघाखोकी लागिरहने मानिसमा पिनास हुने सम्भावना बढेर जान्छ । धुलो, धुवाँ, तथा एलर्जीका कारण नाकमा हुने संक्रमणले पनि पिनासको जोखिम बढाउँछ। नाकको हड्डी बांगो हुनु पनि पिनासको प्रमुख कारण हो । हड्डी बांगो हुँदा सिँगान वा फोहोर पदार्थ जमेर बस्छ, जसले श्वासप्रश्वासमा समस्या पैदा गर्छ र पिनास हुन्छ।